केशवराज जोशी काठमाडाैं, ५ जेठ
मनसुन सन्निकट छ । वर्षातको समय आउँदै छ । पानी पर्नेछ । बाढीपहिरोले आतंक सिर्जना गर्नेछ । सरकार अनेक बहाना खोज्नेछ । आफ्नो निरीहता प्रकट गर्नेछ । ‘आलोचना बढी हुन थाल्यो भने प्राकृतिक प्रकोपका अगाडि कसको के लाग्छ र ?’ भनिदिनेछ, बस् । समस्यामा परेकाहरू हारगुहार गर्नेछन् । केही चटकेहरू समाजसेवीको रूप धारण गर्नेछन् ।
यो बीचमा पत्रकारहरू पनि निराश बन्नुपर्ने छैन । उनीहरू पनि आकर्षक समाचार शीर्षक पाउनेछन्– ‘एकातिर कारोनाको मार, अर्कोतिर वर्षातको प्रहार’ । यस्तैयस्तै दृश्य देखिनेछ यो वर्षातमा । तर, सरकार जिम्मेवार भएर लाग्ने हो भने सम्भावित यो चित्रलाई फेर्न धेरै कठिन हुने छैन । समाचार शीर्षकहरू अर्कैै किसिमका पनि हुन सक्नेछन् ।
पोहोर सालसम्म यिनीहरूमध्ये कतिपय अहिलेको समयमा पानीमा पौडी खेल्दै ज्यान जोगाइरहेका देखिन्थे । कोही कसैलाई बचाउनमा ब्यस्त हुन्थे । कोही आफ्नो सामान त कोही वस्तुभाउ जोगाउनमा तल्लीन हुन्थे । तर, यसपल्ट त्यो पुरानो दृश्य फेरिएको छ । बाढीको उच्च जोखिममा रहेको त्यो बस्तीका यी बासिन्दाहरू अहिले सुरक्षित छन् ।
यिनीहरूको बस्तीमा पानी भरिएको छ । घरको स्वरूप नै बिगार्ने गरी घरभित्र पानी पसेको छ । पूरै बस्ती डुबानमा छ । तर, मानव जीवन जोगिएको छ । जीवन जोगिए घर त फेरि पनि सजाउन सकिनेछ । वास्तवमा राज्यसंयन्त्र जिम्मेवार हुने हो भने पूरै यसरी दृश्य फेरिन सक्छ । समाचार यसरी फेरिन सक्छ ।
अन्त्येष्टिका लागि जमिन नपाएर आफ्नो सन्तानलाई पानीमै विसर्जन गर्ने एक निरीह बाबुको समाचार धेरै पुरानो भएको छैन । बिर्सिसकेका छौँ भने त्यो कुरा अब सम्झिन आवश्यक छ ।
मानव सभ्यताको सुरुवातको पहिलो चरणमा सबै कुराको कारक ईश्वरलाई मानिन्थ्यो । राम्रो वा नराम्रो जेजति हुन्छ, त्यो सबै प्रकृतिकै देन हो भन्ने मान्यता थियो । भगवानले चाहँदा जे पनि हुन्छ र उसले नचाहने हो भने केही पनि हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो ।
दोस्रो चरणमा कारक तत्त्वको बारेमा चिन्तन गर्दागर्दै मान्छे प्रकृतिको वर्चस्व स्वीकार गर्ने विन्दुमा आइपुग्यो । त्यसपछि प्रकृतिलाई कारक मान्न थालियो । यो अवधारणाअनुरूप प्रकृतिमा जेजे घटना हुन्छ, त्यो सबै प्राकृतिक नियमका आधारमा हुन्छ । सबै थोकको निर्धारक प्रकृति नै हो । अरू केही होइन । प्राकृतिक नियमले यही भन्छ । र, अहिले आएर सबै कुराको कारक मान्छे स्वयम् हो भन्ने मान्यता विकसित भएको पाइन्छ । मानवीय व्यवहार, विचार र राज्यको चरित्रले सबै कुरा निर्धारण गर्दछन् भन्ने मत राखिन्छ अहिले ।
आधुनिक भनिएको अहिलेको समयमा राज्यको भूमिका प्रधान मानिन्छ । अहिलेको राज्यमा व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण निर्णयाधिकार राज्यसंयन्त्रलाई दिएको हुन्छ, जसको प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधिले गर्ने गर्दछन् । त्यसैले अहिले राम्रो वा नराम्रो जे हुन्छ, सबैको राज्यलाई जिम्मेवार मानिन्छ ।
अहिले सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा लागेको छ । यसलाई लागेको पनि के भन्नु र खै ? लागेको जस्तो गरेको छ भन्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले यस्तो चित्र देखाउने प्रयत्न हुन्छ, मानौँ कोरोनाबाहेक अरू कुनै समस्या नै छैन संसारमा । मानौँ, कोरोनाबाहेक अरू क्ुनै रोग नै छैन संसारमा । मानौँ, कोरोनाबाहेक अरू कुनै कुराले मार्न सक्दैन मान्छेलाई । जुन यथार्थभन्दा निकै पर छ ।
कोरोनाको कुनै औषधि वा खोप पत्ता नलागेको अवस्थामा भौतिक दूरीले यसको संक्रमण कम गर्न सक्ने सुझाव दिन्छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू । उसो त यो विषयमा स्वास्थ्यकर्मी नै अलमलमा रहेको कुरा बुझ्न कत्ति गाह्रो छैन यतिखेर ।
कोरोना आफैँमा कुनै रहस्यभन्दा कम छैन । यो झुक्याउने कलामा मान्छेभन्दा पनि माहिर भएर देखा परेको छ । खैर आजको विषयवस्तु त्यो होइन । आवश्यक परे यो विषयमा अरू कुनै दिन कुरा गरौँला ।
स्पष्टता होस् कि नहोस् अहिलेको समयमा स्वास्थ्यकर्मीको कुरा मान्नुको विकल्प छैन । कोरोनाविरुद्धको कुनै किसिमको औषधि र खोपसमेत पत्ता नलागेको अवस्थामा अहिलेको उत्तम उपाय भनेको व्यक्तिव्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम गर्नु हो । तर, बाढी आतंकको बीचमा स्वास्थ्यका जानकारहरूले सुझाएअनुरूपको भौतिक दूरी कसरी कायम गर्ने ? यो नै आजको अहम् प्रश्न र गम्भीर चुनौती पनि हो ।
कोरोनाको संकट कहाँसम्म लम्बिन सक्छ भन्ने कुरा यकिन छैन । यो बीचमा औषधि वा खोप नै पत्ता लाग्यो भने पनि यो संकट आगामी साउन, भदौसम्मै कायम रहने निश्चित छ ।
लकडाउन गर्नु नै सबै कुराको समाधान हुन सक्दैन । तर, हाम्रो सरकार लकडाउन घोषणा गरी त्यसपछिका सम्पूर्ण जिम्मेवारी बिर्सेर मस्त निदायो । सरकारले २ महिने लकडाउन अवधिमा पनि न सम्भावित संक्रमितको पहिचानमा गम्भीर ध्यान पुर्‍यायो, न त यसको फैलावटको तीव्रतालाई नियन्त्रण गर्ने दिशातिर नै प्रभावकारी नजर दौडायो । यी तमाम कारणले गर्दा कोरोनाको संकट कम्तिमा अझै २/३ महिना कतै न कतै कुनै न कुनै स्वरूपमा रहने प्रष्ट छ । त्योभन्दा लामो जति पनि जान सक्छ ।
यो २/३ महिनाको समय भनेको भीषण वर्षात् र बाढीपहिरोको समय हो । यो समयमा विशेषतः तराईका विभिन्न बस्तीहरू डुबानका पर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पर्याप्त पूर्वतयारी नहुने हो भने न बाढीको प्रकोप रोक्न सकिन्छ, न त कोरोना आतंकका विरुद्ध भौतिक दूरी नै कायम गर्न सकिन्छ । नयाँ तरिकाले सोचिएन भने मानिसहरू दोहोरो मारमा पर्ने निश्चित छ ।
यो गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नका लागि सरकाले केही उपयाहरू अवलम्बन गर्न सक्छ । जसको तयारी आजकै मितिबाट गर्न आवश्यक छ ।
चुनौती न्यूनीकरणका अनेक उपाय हुन सक्छन्, जसको बारेमा समय रहँदै छलफल र बहसबाट एउटा निचोडमा पुग्न सकिएला । तर, जे गर्नु छ, समय छँदै गरेको राम्रो । संकट आइसकेपछि आत्तिनु र अत्तालिनुको विकल्प हुन्न ।
प्रकृतिसँग जुध्न सकिँदैन । यसको अनुकूल भैदिने मात्र हो । त्यसैले विज्ञहरूको राय सल्लाहमा अनुकूलनको कुन विधि अपनाउँदा उपयुक्त छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । मेरो सामान्य विवेकले बाढीको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीका बासिन्दाहरूलाई न्यून जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वा जोखिमरहित क्षेत्रमा स्थानान्तर गर्न आवश्यक देख्छ ।
बस्तीका बस्ती स्थानान्तरण गर्नका लागि ठूलो क्षेत्र आवश्यक पर्छ । त्यो सम्भव भएन भने कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानान्तर गर्न सकिएला ।
हाम्रो समाज भनेको बलियो पारिवारिवारिक र सामाजिक संरचना तथा आपसी विश्वासमा अडेको समाज हो । तर, हाम्रो त्यो पहिचानलाई पनि अहिले देखापरेको कोरोनाको महामारीले भत्काउँदै लगेको छ । जसले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
मान्छेमान्छेको नजिक नरहने र मान्छेले मान्छे नछुने अहिलेको अवस्थामा त्यो सामाजिक संरचना र सामाजिक सम्बन्ध भत्किनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले विपदको समयमा समाज विगतको झैँ क्रियाशील हुनेछैन । समस्यामा परेकाहरूले पहिलेको जस्तो आफन्तको घरमा आश्रय पाउने छैनन् ।
त्यसैले अब जे गर्नु छ, राज्यले गर्नुपर्ने छ र संकट आइसकेपछि राज्य पनि आफ्नो निरीहता प्रकट गर्नुबाहेक थप केही गर्न सक्ने अवस्थामा रहने छैन । तसर्थ जे गर्नु छ, समय रहँदै गर्दा राम्रो हुन्छ । प्रकोपविरुद्धको पूर्वतयारी यसको उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन् । तर, मेरो सामान्य विवेकले बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने विकल्पलाई उपयुक्त विकल्प मान्दछ । त्यसका लागि चिसो र तातोबाट जोगाउने खालका त्रिपाल र म्याटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसको अभ्यास भूकम्पको समयमा पनि भइसकेको छ । ज्यान जोखिममा पर्नुभन्दा केही समय कष्टपूर्ण जीवनयापनका लागि मानिसहरू सहजै तयार हुनेछन् । उनीहरूबाट आनाकानी हुने देखिँदैन ।
भोकमरी, बाढीपहिरो, कोरोनालगायतका धेरै किसिमका समस्यासँग एकसाथ जुध्नुपर्दा समाजको स्वरूप कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तसर्थ सम्भावित समस्या न्यूनीकरणको पूर्वतयारीमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ५, २०७७, १३:३२:००